Potato Chirimwa Kutenderera: 1: 3 Kana 1: 4 Kana Zvimwe - Potatoes News
Varimi vazhinji vezvirimwa vanodawo imwe nzvimbo, asi chokwadi chehupfumi chiri kuvamanikidza mune imwe nzira. Chirongwa chekurima chevarimi vanorimwa vane avhareji yetamati 1-pa-3 chinoramba chiri cheyakajairwa here kana kuti pane tarisiro yekutenderera kwakawanda? Uye kana zvirizvo, ndiani anobhadhara mutengo wekuwedzera?
Pane purazi rekutsvagisa De Schreef muFlevoland, kuyedzwa kwenguva refu kwekutenderera kwezvirimwa kwakagadzwa muna 1963 nesangano rehurumende raimbovapo, iro rakamhanya kusvika 1990. Zvakapa nzwisiso yakakosha mukukakavadzana pakati pekudzoka kwemari nemhedzisiro yakaipa yekutenderera kwakakora pane goho. uye chirwere chinobatika. Mazhinji eaya maonero anoshandiswa kusvika nhasi, nekuti nhaurirano ichiri kungofanana nemusoro wenyaya: iwe unogona sei kuramba uchirima uye panguva imwechete uchichengetedza hurongwa hwekurima hwakagadzikana?
Iine avhareji yekurima kwe1-kusvika-3, murimi wechiDutch anorimika anenge ari padanho rekuwedzera acreage yematatata. Zvimwe zvirimwa zvine simba zvakapihwawo chikamu chinowedzera muhurongwa hwezvirimwa, zvichikanganisa acreage yezviyo, chirimwa chakatanhamara chekuzorora. Izvi zvine mhedzisiro paivhu uye pakutenderera kwezvirwere. Mupfungwa iyoyo zvine musoro kukakavara nezve mapurani akareba ekuvaka, nekuti izvozvo zvichagara kwenguva yakareba sei?
'Varimi vechiDutch vanorimika vari pachidanho uye vacharamba vachidaro,' anodaro foromani wekurima weLTO Jaap van Wenum. 'Nekuda kweruzivo uye nehunyanzvi, masisitimu ekurima ari kugara achigadziriswa nekuvandudzwa. Kuwedzera chirongwa chekuvaka kunogona kuve chikamu cheichi, asi hakufanirwe kuve. Ini ndinongoona kuwedzera zvirongwa zvekuvaka zvichiitika kana modhi yemari inogona zvakare kubatanidzwa kwazviri. Zvakare, sarudzo yekuwedzera chirongwa chekuvaka inonyanya kuenderana neanamuzvinabhizimisi nemamiriro ezvinhu. '
"Kutenderera kunopfuura kusarwara nechirimwa, zviri zvakare kuchengetedza ivhu rakagwinya gezond"
PETER KOOMAN, AIVA PUROFESA WEZVINHU ZVEMAZWI PAAERES UNIVERSITY YEMAHARA SAYENZI
Pakutanga gore rino, accounting account Countus akabata webinar nezve kuwedzera mapurani ekuvaka mune imwe yenzvimbo dzakanyanya kurima muNetherlands, iyo Flevopolder. Nyaya iyi iriko, sekutaura kwa chipangamazano Ruthger Steenbeek. Muganhu wacho wasvika. Varimi vanosarudza kupa ivhu zororo zvishoma uye vari kutsvaga mhinduro mukutsinhana nekuvaka dzimba. ' Haone mamiriro ezvinhu nezvirimwa zvakawanda zvekuzorora zvinodzoka chero nguva munguva pfupi.
Potato chirimwa kutenderera
Steenbeek yakaverenga kuti zvaizorevei kune 100-hectare purazi rinorimwa riine chirongwa cheFlevoland chirimwa chekusanganisira makumi mashanu muzana ezviyo muhurongwa hwezvirimwa. Muchiitiko ichocho, kurimwa kwembatatisi yaizowedzerwa kubva pa50-kusvika-1 kutenderera kuenda pa4-kusvika-1, uye zvimwe zvirimwa zvekukohwa zvaizodzikira mukuwanda kwekurima. Padanho rerongwa hwekuvaka, danho iri rinoreva 'chinhu chekukuvara' chemazana matanhatu emadhora pahekita pagore.
'Pamusoro pezvo, hatina kufunga nezve chero goho rekuwedzera kana hutano hwakanaka hwezvirimwa. Asi izvo zvinokurumidza kuratidza ndezvekuti iwe unofanirwa kutora chitsama chemakumi matanhatu ezviuru euros yakaverengerwa pamusoro pekambani yese kuti ukwanise kuwedzera kusvika pano. '
Ramangwana rezvekurima Basa revarimi uye varimi mune yedu nzanga uye kukosha kwekugadzira kwavo chikafu kurikurukurwa. Mune akateedzana 'Ramangwana rekurima', Nieuwe Oogst anoongorora nyaya iyi zvakadzama. Ko iro ramangwana rekurima rinotaridzika sei uye inzvimbo ipi varimi nevarimi vemisika varima mune inoshanduka nzanga? Iwo akateedzana haana kuitirwa kufanotaura ramangwana, asi kupa pfungwa pamagadzirirwo ezvekurima, basa rechikafu, kudyidzana kwenyika, kutongwa kwenharaunda, hutano uye tekinoroji. Tevedza nyaya kuburikidza Nieuweoogst.nl/toekomst .
Mune mamwe matunhu eNetherlands, huwandu huchave hwakaderera, nekuda kwemari yepasi. Asi chokwadi chinosara ndechekuti mashoma muzana anowedzera mugoho nemitengo yakaderera haigone kuitisa uyu mutsauko. Murimi haangambokwanise kubhadhara mari yekuwedzera. Kana iwe uchinyatsoda kushanda pane izvo, semurimi iwe unoda vemabhizimusi nzanga nehurumende kuti uzviite ', anodaro Steenbeek.
Muketani rembatatisi, vanhu havakurumidze kuenda pamwe chete kuhurongwa hwakazara hwekuvaka. Kunyangwe nhanho kubva paavhareji ye1-pa-3 kusvika 1-pa-4 mbatatisi ingave yakaoma zvikuru. Peter Kooman, aimbova mudzidzisi muPatato Chain paAeres University yeApplied Sayenzi, akaverenga muna 2017 mhedzisiro yekuwedzera uku kwekurima kakawanda. Kune avhareji yekutenderera kwe1 kusvika ku4, maDutch varimi vanorima vaizofanira kurima mahekita zviuru makumi maviri nezvishanu mbatatisi shoma.
15 muzana yakawanda goho
Kuti uchengetedze huwandu hwazvino, goho rinofanira kuwedzera neavhareji ye15 muzana. 'Iko kusvetuka kwegoho hakuzoerekana kwauya kubva mukutenderera kwakawanda. Izvi zvichafanirwa kubva kune mamwe matekinoroji ', anodaro Kooman, uyo parizvino akapedza kudzidza semudzidzisi uye anoshandira Solynta, kambani iri kushanda mukusimudzira mbatatisi yemasanganiswa.
Kooman anoona nhanho kubva pa1-pa-3 kusvika pa1-pa-4 sekukura kune hutano, kupa zvirwere mukana mushoma uye sechishuwo chehutano hwevhu. Kupfuura 1-pa-4 hakuwedzeri zvimwe zvakanyanya sekufunga kwake. Anodaidzira kuti 1-to-2 kurimwa kwesitashi mbatatisi 'haina kugadzikana' uye anotarisira kuti vamwe varimi vachatsvaga kuwedzera. 'Unogona kuramba uchivaka mukumisidzana uye uchiramba uchigadzirisa. Asi kutenderera kunopfuura kusarwara nechirimwa. Izvo zvakare nezve chiyero chemuviri uye kuchengetedza ivhu rine hutano. Ndiro basa guru. '
'Kuvaka chirongwa kuwedzera kune mashoma maitiro'
Sustainability ndiyo inonyanya kukoshesa paA Avebe, asi kambani inonongedza mhedzisiro yekuwedzera kwehurongwa hwekuvaka. 'Chirevo chazvino neWageningen Economic Research (kuverenga kweinogona kuitika mitsva yeCAP mirau, ed.) Inoratidza kuti hazvifungidzike kutenderera kwakakura kurimwa kwembatatari kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweNetherlands kuchabatsira mukuita kuti kurima kuve kwakasimba' mutauriri akadaro.
'Sekureva kwaA Avebe, kuderera kamwe kamwe muacreage yemastarch mbatatisi kune mhedzisiro huru kunhengo, mubatanidzwa pamwe chete neketani. Funga nezvevatengesi, vashandi uye vatengi ', anoenderera achitaura Aveve mutauriri.
Jan Kloppenburg kubva Munnekezijl inokura mamakisi epamusoro embeu mbatatisi. Kwemakore akati wandei izvozvi, anga achishanda achiziva akananga kune yakawedzera chirongwa chekuvaka nekutenderera kwe1-pa-5 mbatatisi, kutanga kubva pa1-pa-4 uye dzimwe nguva 1-pa-3. Kutenderera kwake kwakaringana chirimwa kunotaridzika seichi: mbatatisi, zviyo, hanyanisi, beet, zviyo, mbatatisi, makore mana ehuswa uyezve mbeu mbatatisi zvakare. 'Ndine rombo rakanaka rekukwanisa kuwana nzvimbo inokwana zvirimwa zvangu. Mukubatana nevarimi vemukaka, kutenderera uku parizvino kunowanzobudirira, kunyange ini dzimwe nguva ndakasimba ', anotsanangura murimi anorimwa weFrisian. Mune ruzivo rwake, kuwedzera gore rega rega kunoponesa angangosvika maviri kusvika matatu matani echibereko pahekita.
Mumakore achangopfuura akarima mhando imwechete kakawanda, mugore rimwe chete, pazvikamu zvakasiyana zvine 1-pa-3, 1-pa-4 uye 1-pa-5 kumashure. Ikoko akaona misiyano yezvibereko ichitsigirwa zvakare. 'Ini handikwanise kuomesa nenhamba, asi chirongwa chakakura chekuvaka zvirimwa zvangu chinouya kwauri kubva kumativi akati wandei. Mukana mushoma wezvirwere nekuremara uye nevhu risinganyatsoremerwa, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuchengetedza tambo isiri-inversion, semuenzaniso. Nenzira iyoyo ndinoedza kushandira kuti ndiwane kurima kwakanaka. '
Mumushumo, vaongorori vanoverenga kuti nekuchinja kubva pa1 kusvika pa2 kusvika pa1 kusvika ku3 kurimwa, avhareji kurasikirwa kwemari kuvarimi vanorimwa i152 euros pahekita. Iyo acreage yemastarch mbatatisi ichaderera ne10,000 mahekita. Ivhu rakaburitswa rinogona kuzadzwa nezviyo, shuga beet nezvimwe zvirimwa. Kusanganisira hanyanisi, goho rine kukura kwekurima ikozvino kuri kuwedzera nekukurumidza. Iyo acreage yekudyiwa mbatatisi inogona zvakare kuwedzera, asi izvi hazvina kuongororwa uye haisi nzvimbo yese yakakodzera izvi. Vatsvakurudzi vanocherechedzawo kuti kuwedzera kuwanda kwekurima kunotungamira kune yakanyanya njodzi kune muzvinabhizimusi. Mhedzisiro yekushomeka kwembatatisi kuA Avebe uye nekudaro kukwikwidza hakusati kwaonekwa.
Nguva dzose kutenderera kwakasimba
Mukugadzirwa kwembatatisi yembeu, kutenderera kwave kuomarara pamusoro pemakore uye kurimwa kwe1 kusvika ku3 ndiwo muyero mune mamwe matunhu. Izvi zvinogoneka nekuda kwenguva pfupi yekurima pamwe chete neakachena ekutanga zvinhu. Kunyangwe paine zvakare varimi vanoziva vanoomerera ku1-pa-4 kana kunyangwe yakafara. Hungaite here hunhu hwezvinhu zvekutanga kuti zviwedzere kusimudzira kana varimi vazhinji vachikura zvakanyanya? Mune mamwe mazwi: izvo hazvidiwe kune iyo mhodzi yemazamu?
Kana zviri kumukuru weHZPC Gerard Backx, zviri nani kupa zvinokurudzira izvi. Asi sarudzo inofanira kunyanya kugara nemurimi. 'Murimi wese anofanira kuzvisarudzira izvozvo. Usati wazviziva iwe, pane chirongwa kumwe kunhu kwakafanana nekumisikidza zvipfuwo. Mhedzisiro yacho yakakosha uye murimi anoziva kunyatsoita izvi. '
'Kubvisa ropa kuwanda'
Nzira yakanyatsofungidzirwa yekurima, hutano hwakanaka hwekurima uye kuongorora kwakanaka kwakakosha kunaBackx kupfuura kuwanda kwekurima. Kutenderera kwakapetwa kwakanyanya kunetsa kwemari. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchidzora nedambudziko uye nekuwanda kwezvirwere zvisingaumbike, wadii kuwanda?
Foromani wekurima anorimika Van Wenum anosimbisa kukosha kwehutsanana hwezvirimwa. 'Ini ndinofunga tinogona kumanikidza izvi zvakatonyanya, senge marara marara uye mbatatari yekuchengetedza. Chikamu chakatarisana nebasa rakakura rekuita kuti zvirimwa zvive zvakasvibirira kuti zvizadzise zvinangwa zve2030. Isu tinonyatsoda ese marudzi ese maturusi ezvo. Zvirongwa zvekuvaka zvinogona zvakare kuve chikamu cheichi. Asi iwe ramba uchidzoka kumhando yemari. ' Chero zvazvingaitika, ita shuwa kuti varimi vane mukana wekuvaka mune zvirimwa zvisina kurara, anoenderera mberi Van Wenum. 'MuCAP munewo zvinokurudzira izvi. Sei, izvo hazvisati zvazivikanwa chaizvo. Asi pane mikana yakawanda. '
Hupamhi hwehukama hwehukama
Sekureva kwaVan Wenum, zvirimwa zvekuzorora zvinogona, semuenzaniso, kugadzira mari zvine chekuita neEC2 yekuchengetedza muvhu. 'Tinodawo kuona huwandu hwakawanda hwekusangana kwezvirimwa zvakadzika midzi. Uye kuwedzera kutsanangudzwa kwe 'purazi idzva rakasanganiswa' kunopa mikana, kureva kubatana kukuru pakati pekurima nekurima zvipfuyo. Kwete sekuraira, asi semenyu. Nekuti nekambani imwe izvi zvinokwana, neimwe izvo. '
Mubvunzo unoramba wakavhurika wekuti ndeapi mabhenefiti chaiwo kune ivhu uye hutano hwezvirimwa kana varimi vakachengeta kutenderera kwakakura. Uye zvakare, zvakadii nezvezvirimwa kunze kwembatatisi? Kooman anoti nezve izvi: 'Hapasisina mari yekutsvaga kwenguva yakareba, sezvazvaive zvakaita kuDe Schreef panguva iyoyo. Ndiyo ashame. Kurima kwakaringana kunogara kuri kukanganisa pakati pehupfumi nehutano hwevhu. Izvi zvinoreva kuti unofanirwa kuve neruzivo rwemhedzisiro yesarudzo dzako dzekurima. '
Varimi vane basa guru rekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Kune vapi vezvemabhizimusi izvi zvinonakidza? Chii chinobatanidzwa? Uye chii chinobereka? Bvunza mibvunzo yako yese nezvekurima kabhoni panguva ye webinar neMuvhuro 21 Chikumi . nevatauri vevaenzi kubva kuBayer, Rabobank uye LTO.
Iko een extensief bouwplan economisch verantwoord?
/ agronomy /
Tags: kufukidza chirimwa chembatatisikufukidza zvirimwakutenderera kwezvirimwaKurima mbatatisi
Desert nharaunda mbatatisi - Israeri
Wireworm kukuvadza kukura dambudziko mumatatata gore rino
Hutano hwembatatisi: kutyisidzira kwakanyanya uye maitiro ekuita nazvo
Gwayana Weston Inozivisa Zvitsva 2030 Zvinangwa
Fertilizer inotenderera vaparadzira mitsara zvirimwa: ngano
Mbeu mbatatisi kunze kwenyika dambudziko rinodiwa kugadzirisa